TINCTURE OF RHODIOLA ROSEA: FAA'IIDOOYINKA, SIFOOYINKA ISTICMAALKA, CUNTO-KARISKA EE DIYAARGAROWGA, CONTRAINDICATIONS - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo sameeyo tincture of rhodiola rosea (xidid dahab ah), iyo sida ay faa'iido leh
Rhodiola Rosea, loo yaqaan 'herbalists of Altai' walaashii ginseng, "waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay warshad gaar ah oo ka bogsada cudurada kala duwan. Waa qayb ka mid ah daroogooyinka, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa kali ahaan tincture. Sheekadayadu waxay noqon doontaa meesha laga heli karo asalka mucjiso, iyo sida loo dalbado daaweynta.
Rhodiola Rosea waa qaraabo fog oo ka soo jeeda gumeysiga. Waxay ku nooshahay aagagga cimilada leh ee ku yaal xaafadaha buuraha (Alps, Pyrenees, Carpathians), oo ku yaal buuraha Altai, oo aan ka fogayn Lake Baikal, Bariga Bariga, dhulka Jamhuuriyada Tyva, Ural, Siberia, jasiiradaha Ingiriiska iyo Irish, iyo qaarada waqooyiga Ameerika .
Ma taqaanaa? Boqortooyadii Shiinaha ee hore waxay si firfircoon u adeegsadeen sifooyinka bogsashada Rhodiola inay sii dheeraanayaan noloshooda, iyo dhirta waxaa la geeyey Boqortooyada Dhexe inta badan oo ay tahriibinayaan.
Rhodiola waxaa iska leh qoyska Crassulaceae. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dahab (ama casaan) xididkiisa oo aan caadi ahayn (iyo urta dabeecadda ee Rose). Geedku wuxuu koraa 0.5-0.7 m dhererka iyo horumarinta nidaam xidid awood leh. Xiddiga dahabiga ah ee dahabiga ah, oo awood u leh inuu sii adkaado, isagoo saaran dusha sare, waxaa lagu kala duwanaa dhadhan qadhaadh ah iyo dhadhan casaan.
Baro naftaada bogsashada leh ee bogga caloosha, xididka kalgan, euphorbia Pallas, xididka gaduudan, xididka gabbaldayaha, celery, sinjiga.
Warshadu waxay jeceshahay qoyaan mana u baahnayn tiro badan kuleyl iyo iftiin. Nidaamka asaasiga ah wuxuu awoodaa inuu horumariyo xitaa carrada dhagaxa. Qeybta sare ee Rhodiola waxay ka kooban tahay caws yar oo ah dherer (10-70 cm). Mid ka mid ah dhirta ayaa laga heli karaa laga bilaabo 1 illaa 10 afkeelo oo la mid ah caleemaha ukunta-qaabeeya. Sameynta inflorescences wuxuu bilaabmaa Juun. Kuwani waa gaashaan ka timid ubaxyada jaalle ah ee ku uruuraya kooxo. Ka dib 2 bilood (bishii Agoosto), miraha waxay u muuqdaan meelkooda: Koontooyinka waxay ka kooban yihiin caleemo cagaaran, gudaha taas oo ay ku jiraan abuurka dhalashada.
Tani waa warshad aad u tayo badan oo leh sunta sunta leh oo leh saameyn ballaaran oo ku saabsan jirka bini'aadamka, iyada oo aan keenin qabatimid.
Digirta madow, juuska miraha, qajaar iyo qoryaha lafdhabarta ayaa sidoo kale dhaqaajiya dhaqdhaqaaqa maskaxda.
Waxay hagaajin kartaa:
koorsada geedi socodka oksaydhka ee jirka;
heerka awoodda tamarta ee maskaxda;
hawlaha hay'adaha maqalka;
dhaqdhaqaaqa cagaarshow, shaqeynta qanjidhada thyroid, qanjidhada adrenal, qanjidhada jinsiga;
iska caabinta jidhka ee saameynta waxyeellada dibadda ee dibadda.
Intaa waxaa dheer, Rhodiola wuxuu caadi u yahay cadaadiska dhiigga, bogsashada nabarrada, boogaha, wuxuu baabi'inayaa barar, dermatitis iyo finan kale. Saamaynta kicinta ee rhodiola waxay la mid tahay tan ginseng.
Qaabka daawada ee tincture daawada
Tincture dhamaystiran ee Rhodiola Rosea waxaa laga iibsan karaa farmashiyaha ee foomka ka soo bixinta dareeraha. Waxaa lagu iibiyaa dhalooyin madow oo ah 30, 50 iyo 100 ml.
Sida loo diyaariyo tincture laftiisa: muuqaalada ka mid ah ururinta iyo diyaarinta qalabka ceeriin ceeriin
Rhodiola wuxuu ku soo baxaa wax soo saarka ama isticmaalka shakhsiyeed waxaa loo oggol yahay in lagu ururiyo tiro yar. Tani waxay dhacdaa inta lagu guda jiro muddada abuuritaanka, marka xididku uu kordho dhowr jeer.
Marka goosashada geedka
Rhodiola waxaa la goostay dhamaadka August marka la barbardhigo abuurka (miraha) abuurka horay loo sameeyay cawska, laakiin kama dambeyntii Sebtembar. Waxaad ka heli kartaa deegaanka dabiiciga ah.
Waa muhiim! Qalabka shaqada wuxuu ku haboon yahay oo keliya qaybta dhulka hoostiisa, oo leh wax ka badan 3 afkoda.
Wixii dhirta goynta iyo u sii isticmaalida ujeedo caafimaad waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo rhizomes of Rhodiola 4 sano jir.
Xeerarka soo saarista iyo qalajinta
Wixii soo goynaya qashinka dibadda iyo nadiifi dhulka. Si dhakhso ah ugu duub maro mar hore u qoyan biyo. Ka dib markaad guriga ku soo noqoto, isla markiiba u gudub si aad u diyaariso asalka si aad u sii kaydiso. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad kala qaybiso qaybo ballaaran oo ka soo saaro qolofka roodhida. Xogta u kala qaybi qaybo yaryar oo ka tag oo qalaji maalin. Qalitaanka waa in lagu sameeyaa qaab dhismeedka hoose. Ku rid lakabka khafiifka ah ee rhizome la jajabiyey waraaqaha wargeyska, sidaas darteed qoyaanka ka baxayaa geedka ka fiican. Marka xigta, waa inaad qallajisaa alaabta ceeriin ah ee xaashida dubista oo ku rid foornada dhowr saacadood, heerkulka waa in uu ahaado mid hooseeya, qiyaastii 50 darajo. Xaqiiqda ah in xididku bilaabo inuu soo jiido casaan waa calaamad u ah dhammaadka qalajinta. Dabcan, waxaad isticmaali kartaa qalajiye koronto khaas ah. Waxaa ka wanaagsan inaad kaydiso walxo cayriin ah bacaha wax lagu dhajiyo meel madow oo aan lahayn wax ka badan saddex sano.
Sida loo sameeyo tincture: tallaabo by qodaya talaabo
Waxaad diyaarin kartaa tincture of Rhodiola Rosea guriga iyada oo aan waqti kasta oo khaas ah iyo kharashka.
xidid la jajabiyey oo Rhodiola Rosea ah - 50 g;
aalkolo (70 °) - 0.5 l.
Waa muhiim! Tincture sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa cabitaanka aalkolo, laakiin si tan loo sameeyo, yareeyo qadarka alaabta ceeriin khudradda ilaa 10 garaam.
Shub qalalan, rhizome budada ah ee warshadda leh khamriga iyo qaso.
Ku rid taangiga meel diiran oo diiran. Waqtiga faleebo - 14 maalmood. Ha iloobin inaad marmar walaaqdo.
Ka dib 2 toddobaad kadib, filter tincture.
Haddii aad go'aansatid inaad xafladahaaga ku dhajisid cabitaankaas, waa inaad hoos u dhigtaa xooggeeda adoo ku daraya 350 ml oo biyo ah. Nacnacnadu ma noqon doonto mid culus 2 qaado oo malab ah.
Video: tincture recipe on xididka dahabka
Xeerarka iyo nidaamyada
Dadku waxay dareemaan korriin maskaxeed iyo jireed, iyo sidoo kale ka hortagga hargabka, IRR, hypotension, tincture ayaa qaatay labo ama saddex jeer maalintii maalin 15-30 daqiiqo ka hor cuntada. Qiyaasta lagu taliyay waa 20-30 dhibcood halkii koob ee rubuc oo biyo ah.
Waa muhiim! Laguma talin in la isticmaalo tincture galabtii.
Koorsada daaweyntu waxay socotaa, sida caadiga ah, ugu badnaan 20 cisho, marka laga reebo xaaladaha cudur-maskaxeed, marka muddada daweynta la kordhiyo illaa 2 bilood, qadarka tincture waxaa loo keenay 30-40 dhibcood halkii lagu soo dhaweyn lahaa.
Samee tincture of chestnut faras, aboor ku beeray, feijoa, lilac, looska, lowska, strawberries, sabelnik, currant madow iyo aconite.
Qaado tincture waa in si taxadar leh oo si adag loo eego sida ku qiyaasta qiyaasta. Ha ilaawin in tani ay tahay, inkastoo dhammaan dabiiciga ah, daroogo.
Waxyeelooyinka suurtagalka ah:
dhibaatooyinka hurdada (hurdo la'aan);
Isla markaad aragto ugu yaraan mid ka mid ah astaamahan, isla markiiba jooji qaadashada tincture iyo la tasho dhakhtar.
Kiisaska daroogada xad dhaafka ah lama qorayo. Cawaaqibta suurtagalka ah ee tani waa xanaaq, istiraatiijiyada xagjirnimada. Haddii qiyaasta lagu taliyey in si aad ah loo dhaafo, waxaa haboon in la dhaqo caloosha oo la mariyo koorso daaweyn leh enterosorbents.
Waa mamnuuc inaad u qaadato tincture dadka dadka u nugul daroogada. Intaa waxaa dheer, laguma talinayo in la isticmaalo daroogada iyadoo ay joogaan:
Ha u dhiibin daroogada caruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano waxayna si taxadar leh u daaweeyaan dadka qaba sonkorowga.
Ma taqaanaa? Lo'dooyinka Mongoliyaanka waxay karkariyaan xididdada Rhodiola ee maraq ama biyo iyo maraqan xayawaan badan oo xayawaan leh.
Rhodiola Rosea waa geedo daaqsin ah, asalka ah ee uu leeyahay guryaha bogsiinta cajiib ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo cudurada ENT, dhibaatooyinka kelyaha, qanjidhada adrenal, thyroid iyo xubnaha kale. Ka hor inta aadan isticmaalin tinctures dhirta, ha ilaawin inaad la tashato dhakhtarkaaga.
Hadda waxaan cabbaa rhodiola, saameyntu waa aniga waana jeclahay. Aad baan u faraxsanahay :) Aroortii, haddii aad qaadato, waxaad dooneysaa inaad maalin uun sameyso, guurto. Daqiiqaddii waxaan dareemay dareen aan la iloobi karin muddo dheer (15-20 sano ka hor) - Waan socdaa, waan isbeddelayaa, oo si lama filaan ah ayaan rabay inaan u ordo sidaas oo kale -waxay igu kici kartaa naftayda, haddii kale waxaan ku burburin lahaa dhowr tallaabo ... biggrin.gif gaar ah.
Laguma talin qof kastoo cadaadis leh. Waxaan u isticmaali jirey inaan mar uun qaato, ka dibna waan iska daayay. Dhowaan waxaan cabbi jiray shaaha lixda fiidnimo, sida ma jirto, 8kii fiidnimo sida nin naxaas ah ayaa weeraray, oo leh tamar fara badan, sidaas darteed ma seexan karo ilaa seddex habeenkii.
//forum.pickup.ru/index.php?/topic/47086-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%80 % D0% Qiyaas ahaan% D0% B7% D0% Qiyaas ahaan% D0% B2% D0% B0% D1% 8F%% D0% BD% D0% B0% D1% 81% D1% 82%% D0%%% D0% B9% D0% BA% D0% B0 /